Maalinta: Sebtember 7, 2018
Xakamaynta Dabaysha ee Adeegga Sharci-darrada ah
Waaxda Gaadiidka Dawladda Hoose ee Magaalada Manisa, si looga hortago gaadiidka burcad-badeednimada iyo in laga hortago gaadiid aan sharciyeysnayn oo ka yimaada bannaanka magaalada ayaa sii waday kormeerka iyada oo aan la carqaladeyn. Macnaha guud, kooxaha, Demirci [More ...]
Neshter De Mihrabli Saameynta
Alinur Aktaş, Duqa Magaalada Bursa Metropolitan Dowlada, oo eegaya shaqooyinka ka soo baxa marxaladda dhameystirka Isgoyska Mihraplı, wuxuu yiri wadooyinku waa 'xididka nolosha' ee magaalooyinka waxaana uu yiri, "Waxaan sameyneynaa angiography. Marka la eego baaxadda qorshaha waxqabadka degdegga ah ee la diyaariyey [More ...]
Heshiiska Dib-u-Celinta Gacanka iyo Dekadda Port dhammaystiran
Qandaraaska saddex geesoodka ah ee wadatashiga caalamiga ah oo ay soo qabanqaabisay Izmir Metropolitan Munns ee ku dhexyaala 'Mashruuca Dayactirka Gacanka iyo Dekadda. Artı Proje Danışmanlık wuxuu ku guuleystey hindisada halka 6 uu ka qeybqaatey dalabkii 12 ee shirkadda shisheeye ee 9. shirkadda [More ...]
96 waa xubin ka tirsan wadayaasha gaadiidka dadweynaha ee ka kala yimid wadamo kala duwan waana shirkadda ugu weyn ee gaadiidka dadweynaha adduunka. [More ...]
Digniinta Dheeriga ee Kutahya oo ka socda TCDD
The Republic of Turkey Tareennada State (TCDD) General Directorate of Property, ka leexinayn ee line tareenka Kütahya-Eskişehir-Balikesir Electrification iyo Plant shaqada rakibo waxaa la sameeyaa digniin a high-voltage. Qoraalka qoraalka ah ee ay soo saareen TCDD, Eskişehir (marka laga reebo) –Alayunt - Kütahya - [More ...]
Wasiirka Turhan: Qodobka muhiimka ah Waxaan ku dareynaa muhiimada weyn ee Wasaaradda Mashruuca Wadajirka ee Belgrade-Sarajevo
Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Cahit Turhan, mugga ganacsiga ee ka dhexeeya Turkey iyo Bosnia iyo Herzegovina sannadkii la soo dhaafay, ayaa sheegay in uu ogaaday saabsan 618 million dollars, tiradaasi 1 billion dollars in saaridda muddo gaaban [More ...]
Mashruuca cusub ee magaalada, oo laga dhisi doono labada dhinac ee kanaalka cusub, kaas oo la furi doono inta mashruucu ka socdo ee Istanbul, ayaa xiiso weyn u leh Istanbul. MAGAT CURPORATE CHANNEL EE KU SAABSAN ISTANBUL [More ...]
3. Garoonka diyaaradaha ee 2019
Markii la furay, maalgashiga ayaa kusii kordhayaa agagaarka garoonka diyaaradaha ee magaalada Istanbul kaasoo martigelin doona 90 milyan oo rakaab ah sanadkii. Madaxweynaha ISTTA Halil Kormaz ayaa yiri, uz Waxaan rajeyneynaa in hoteelo cusub laga furi doono 2019 ”. Marxaladda koowaad ee 29 3 ayaa furi doonta Oktoobar. Madaarka, gudaha [More ...]
Qiimaha Tigidhka Ka hor Duulimaadda Madaarka Cusub ee Istanbul
Kuwa doonaya inay ka qeybgalaan duulimaadkii ugu horreeyay ee THY ee lagu qabto garoonka diyaaradaha ee magaalada Istanbul ayaa dhamaaday tigidhada. Qiimaha tikidhada 31 ee duullimaadyada Istanbul-Ankara bishii Oktoobar ayaa ka sarreeyay qiimaha saqafka. Sida ay ku waramayaan wararka ku saabsan garoonka diyaaradaha ee loo yaqaan “AirHaber”, dhisme ka socda magaalada Istanbul [More ...]
Khadka Cusub ee IET iyo Marmaray Duulimaadka IETT
MR5 Yenikapı Sahil-Yenikapı Marmaray, oo ay qorsheeyeen shirkadda İstanbul Electric Tram iyo tunnel Operations (İETT) iyada oo la raacayo İDO iyo jadwalka Marmaray / Metro, ayaa la hawlgali doonaa bisha Sebtember. Basaska Badda Istanbul (IDO), [More ...]
Mucaaradka Dhuxul-Hoosta ee Istanbul, Muddadii Buuxinta ee Akiilku bilaabmayo
Dowladda Hoose ee Magaalada Istanbul waxay waddaa mashruuc cusub oo looga hortagayo wasakhda deegaanka. Adoo ku tuuraya dhalooyinka xayawaanka ah ee Autonon, Istanbulkart (akbil) ayaa la buuxin doonaa. Immisa dhalo xayawaanka ah ee ku jirta mashruucan akbil ayaa taageeri doona isbeddelka [More ...]